PC karama Manufacturers & Suppliers - China PC kalama Factory
N'èzí egwuregwu karama
Obere karama mmiri maka egwuregwu n'èzí. Enwere ike itinye ya ngwa ngwa na akpa akwa, akpa a na-etinyekwa mmiri n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla. Nkọwapụta ngwugwu anaghị ebute ibu arọ na mmega ahụ.
Egwuregwu mmiri n'èzí nke e ji ihe ndị na-eme ka ebe obibi mara mma dị mfe, dị mfe ibu ma dị mfe iji karịa karama mmiri nkịtị. Kwesịrị ekwesị maka ọtụtụ egwuregwu n'èzí chọrọ hydration ngwa ngwa. Dị ka ịgba ọsọ, ịrị ugwu, ahụike, ọzụzụ na ihe ndị ọzọ. Ọ dịkwa ezigbo mma na gburugburu ebe obibi, na-eji ihe eji eme nri na enweghị BPA.
Wide Mmeghe Egwuregwu Egwuregwu N'èzí na Aka
Egwuregwu egwuregwu n'èzí nwere aka na mkpuchi uzuzu, nke na-abụghị nanị na ọ na-eme ka ọ dị mma kama ọ na-eme ka nchekwa dịkwuo mma. E jiri ya tụnyere kettles ndị ọzọ, ọ na-adịgide adịgide karị, nchekwa na ntụkwasị obi, ma dị mfe maka mkpuchi. Ezigbo mma maka egwuregwu n'èzí ma ọ bụ iji ụmụ akwụkwọ. Ike zuru oke nke 500 ml. Ọ dị mfe ibu mgbe ị na-egbo mkpa.
Clear Plastic Custom Mmanya Bottle BPA Free
Large-ike egwuregwu kalama na silicone ahụ. Iko ẹphe nwere arc, dụ l'iche l'iche, iphe dụ ẹji, ẹphe dụ lẹ mgboko-a; A na-eji ihe mkpuchi a na-ekpuchi ihe mkpuchi uzuzu, nke dị mma ma dị ọcha.
Sport Bottle Plastic BPA Free Cycling Fitness Na-agba ọsọ
A 1000ml nnukwu ikike egwuregwu kalama. Ọ nwere ike zuru ezu izute gị mmiri replerishment mkpa. Ma ị na-agba ịnyịnya n'okporo ụzọ, na-agba ọsọ n'akụkụ oké osimiri, ma ọ bụ na-azụ mgbatị ahụ. Ọ nwere ike na-eje ozi dị ka gị hydrating nnyemaaka na-ị jupụtara na vitality mgbe niile.
Fitness Eco Enyi na Elu-edu Sport Water Bottle
Kalama mmiri kwesịrị ekwesị maka ụdị egwuregwu n'èzí niile. Na mbara oghere dị mfe iji jupụta na nhicha. Ihe omumu ergonomic adighi nfe. Nhazi nke oghere mmiri na-enye gị ohere ịmegharị mmiri ngwa ngwa.
N'èzí Sports Fitness Water Bottle Portable BPA Free
Jiri ihe eji eme ka gburugburu ebe obibi, nke na-adịghị egbu egbu, enweghị isi pụrụ iche, ọkwa nri, BPA - n'efu, ma lekọta ahụike gị. Ahụ karama ahụ na-agbanwe agbanwe, dị mfe ịpịpụta karama ahụ, mee ka ị theụ mmanya na-agba ọsọ, ma nweta ngwa ngwa ngwa ngwa. Ugo karama nwere ihe eji eme ihe na-adighi nma ma odighi mfe idobe. Mfe na-ebu na njem n'enweghị nsogbu.
Mgbatị Ahụike Ọzụzụ cgba Ọgba n'èzí Egwuregwu Mmiri
Kalama ahụ sitere na ihe ndị dị mma ma enweghị isi pụrụ iche. A na-eji nlezianya emepụta ọdịdị mara mma, na ahịrị ndị ahụ dị larịị, nke dabara na aka. Ejiri nke ọma mee mkpuchi uzuzu iji kpuchie onu mmiri sitere na mmetọ. 750ml ikike, iji gboo mkpa gị. Ọ dị mma maka egwuregwu n'èzí dịka ịgba ígwè, ịgba ọsọ, ugwu na ihe ndị ọzọ.
Fitness Eco Enyi na Elu-edu karama BPA Free
Enwere ike ịrapagidesi ike na akwa igwe kwụ otu ebe, yana enwere ike dakọtara ya na akpa dị iche iche. Nnukwu ikike nke 1000ml nwere ike izute mkpa nke hydrating ọbụna n'oge mmega ahụ siri ike. Ihe eji eme ka gburugburu ebe obibi, karama na-agbanwe, na-eyi akwa, na-eguzogide ọgwụ, ma na-adịgide adịgide. Otu kalama mmiri nke nwere ike ịbụ onye inyeaka kachasị mma.
Plastic Omenala Arinkụ mmiri karama Fitness rigo
A na-emepụta karama egwuregwu n'èzí maka egwuregwu n'èzí. Obere ikike ya, ịdị irè ya na ogologo oge ọ na-eme ka ọ dabara adaba maka ọtụtụ egwuregwu. Dị ka ịgba ọsọ, ịrị ugwu, ịgba ígwè, ahụike na ihe ndị ọzọ. Iji gburugburu ebe obibi, ahụike na nchekwa, enwere ike iji ya jiri obi ike. Kwe ka ọ bulie njem egwuregwu gị elu.
Nkebi nke: BTA035
Nkọwapụta: 173 * 67mm
Agba: Agba a haziri ahazi
Ojiji: Egwuregwu n'èzí